के तपाईंसँग सीप छ ? तपाईंसँग व्यवसाय गर्ने सोच छ र व्यापार आइडिया पनि छ ? अनि लगानी गर्ने पैसा भएन भनेर आफ्नो नयाँ सोचलाई त्यसै खेर फालिरहनुभएको छ ? यदि यसो भने तपाईंका लागि आइडिया स्टुडियो पथप्रदर्शक बन्न सक्छ ।
अझै बुझ्नु भएन ?
त्यसो भए लौ सुन्नुस्, तपाईंजस्तै तमाम नेपाली युवा तथा विद्यार्थीको सोचलाई उद्योगसम्म पुर्‍याउन दरिलो हात भएर केही वर्षदेखि अनवरत रूपमा लागि परिरहेको आइडिया स्टुडियोले यस वर्ष पनि नयाँ कार्यक्रम ‘कलेज आइडिया हन्ट-२०२०’ लिएर आएको छ ।
यस कार्यक्रमले सिर्जनशील युवालाई विशेष स्थान दिइरहेको छ । साथै, तपाईंका नयाँ आइडियालाई पनि यो कार्यक्रमले यथार्थमा बदल्नेछ ।
आइडिया स्टुडियोबाट सञ्चालित कलेज आइडिया हन्टको मुख्य उद्देश्य भनेको सैद्धान्तिक विद्यालाई व्यवहारमा उतार्नका लागि संभावना र अवसर खोज्दै गरेका ती नवप्रतिभाशाली युवा युवतीहरुलाई व्यवसायीक बाटो तय गर्न सहयोग गर्नु हो ।
त्यसैले स्वउद्यमी बन्ने अठोट छ भने तपाईंका लागि गजबको स्थान सावित हुन सक्छ यो कार्यक्रम ।
कार्यक्रम त सही लाग्यो । तर, यो लकडाउनको समयमा कोरोनाको संक्रमण हुन्छ भनेर घरमा नै थुनिएर बसेको ३ महिनापछि कार्यक्रमकै लागि कसरी बाहिर निस्किने ?
पक्कै पनि यही सोचले तपाईंले पाइला रोक्दै हुनुहुन्छ भने ढुक्क हुनुहोस् । यो कार्यक्रम मूलतः टेलिभिजन कार्यक्रम भए पनि परिस्थितिअनुसार घरमा नै बसेर पनि कार्यक्रममा सहभागी हुने व्यवस्था गरिँदै छ ।
त्यति मात्र नभएर तपाईंले अनलाइनबाटै कार्यक्रममा सहभागिता जनाउन फर्म भर्न सक्नुहुनेछ । यसका लागि तपाईंले आफ्नो स्वउद्यमको आइडियाका बारेमा छोटो पिच भिडियोमार्फत पठाउनुपर्नेछ ।
यसरी भिडियो पठाउँदा तपाईको आइडिया ग्रीनोभेसन र सोसल इम्याक्ट संग संबन्धित हुनुपर्ने छ । यस कार्यक्रमले सामाजिक प्रभाव पार्ने खालका र ग्रिनोभेसन आइडियाहरुलाई मात्रै प्राथामिकता दिइने छ ।
घरबाट मोबाइलमा आफ्नो बिजनेस प्लान र बिजनेस गर्ने तरिकाको बारेमा भिडियो खिचेर पठाएपछि तपाईंको आइडियाका आधारमा कार्यक्रमका निर्णायक मण्डलले छनाेट गर्नेछन् ।
यसरी आएका नयाँ आइडियामध्ये उत्कृष्ट १० वटा योजनालाई प्रतिस्पर्धामा उतारिनेछ । प्रतिस्पर्धामा उतार्नलाई कार्यक्रमका सहभागीलाई बिजनेस प्लान कसरी गर्ने, बजार अध्ययन कसरी गर्नेलगायतका विभिन्न प्रकारका तालिम तथा प्रशिक्षण दिइनेछ ।
यो कार्यक्रमले त्यस्ता नयाँ सोच बोकेका नवउद्यमी बन्न चाहने विद्यार्थीमा उद्यमको बिउ छर्ने काम गर्दछ ।
कार्यक्रम त सही रहेछ तर कसरी सहभागिता ? यस्तो सोचिरहनुभएको छ भने तपाईंले सर्वप्रथम आइडिया स्टुडियोको वेबसाइटमा राखिएको कलेज आइडिया हन्टको फाराम भर्नुपर्ने हुन्छ । आजबाट खुलेको फाराम तपाईंले १० साउनसम्म भर्न सक्नुहुनेछ ।
फाराम भर्न त भर्ने तर योग्यता कति चाहिन्छ भनेर सोच्दै हुनुहुन्छ ? धेरै नसोच्नुस्, किनभने यो तपाईंकै लागि हो । जो भर्खर स्नातक या स्नातकोत्तरमा अध्ययनरत हुनुहुन्छ । तर, यस कार्यक्रममा सहभागी हुन भने तपाईं नेपाल सरकारबाट मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत हुनुपर्नेछ ।
बिजनेस आइडिया पनि छ, ऊर्जा पनि छ र अब योग्यता पनि छ भने फारामसँगै तपाईंको नवीनतम सोचलाई यसरी उतार्नुस् भिडियोमा ।
भिडियो बनाउँदा तपाईंको व्यावसायिक विचारको पिच भएकाले आवेदकको अनुहार प्रस्ट प्रकट भएको हुनुपर्दछ । तपाईंले आफ्नो विचारको कथन भिडियो, एनिमेटेड भिडियो, फोटो भिडियो आदिसमेत पेस गर्न सक्नुहुनेछ । तर, भिडियोमा तपाईंको अनुहार भने प्रस्ट देखिने हुनुपर्दछ ।
बढीमा २ मिनेटसम्मको भिडियो बनाउँदा तपाईंले अंग्रेजी वा नेपालीमध्ये एउटा भाषा प्रयोग गर्न सक्नु हुनेछ । यसरी भिडियो बनाइरहँदा तपाईंले आफ्नो आइडियाको नाम राख्नुपर्नेछ । र, भिडियो फाइल नाम पनि तपाईंको आइडियाको नाममा हुनुपर्नेछ ।
यसरी कार्यक्रमको नियमबमोजिम भिडियो र आफ्ना आइडिया आइडिया स्टुडियोको वेबसाइट http://ideastudio.org.np/submit-college-idea-hunt/ मा गएर फाराम भरी पठाउन सक्नुहुनेछ ।
यसरी कलेजका विद्यार्थीलाई स्वदेशमा उद्यमी बनाउन सिकाउने आइडिया स्टुडियोले कार्यक्रम कलेज आइडिया हन्ट-२०२० मा छनौट भएका १० उत्कृष्ट आइडिएटरलाई २ दिने उद्यमशिलताको अनलाइन कार्यशालाको अवसर दिइने छ । जहाँ उनीहरु आफ्ना विचारहरुमा काम गर्नेछन् ।
कार्यशालापश्चात शीर्ष १० आईडियाहरुले झन्डै १५ सय भन्दा बढी दर्शकको अगाडी एक भव्य समापन कार्यक्रममा आफ्नो सोच प्रस्तुत गर्नेछन् । ती मध्यशीर्ष ३विचारहरुले जनही रुपैयाँ एक लाख पुरस्कार प्राप्त गर्नेछन् । शीर्ष ३ विजेताहरुले इन्क्यूवेशन र आईडिया स्टूडियोको टिभी कार्यक्रममा प्रत्यक्ष प्रवेश पाउनेछन् ।
जहाँ उनीहरुले आफ्नो सोचलाई व्यवसायमा रुपान्तरण गर्नको लागि ज्ञान, परामर्श र नेटवर्क प्राप्त गर्नुका साथै थप व्यवसायीक लगानीका अवसरहरु पनि प्राप्त गर्नेछन् । साथै विद्यार्थीलाई उद्यमशिल र उर्जाशिलबन्न यो कार्यक्रमले थप प्रेरणा दिने निश्चित छ ।
आइडिया स्टुडियोको यसअघिको सिजन ४ मा २४ प्रतिस्पर्धीलाई ४ विधामा उतारेर व्यावसायिक तालिम तथा प्रशिक्षण दिइएको थियो । साथै, उनीहरूलाई मुलुकका प्रतिष्ठित व्यवसायी तथा अग्रज व्यक्तिबाट प्रशिक्षणसमेत दिइएको थियो ।
प्रकाशित मिति: सोमबार, असार ८, २०७७, २०:५५:००